BBC Somali Somali
Warbaahinta ayaa ku soo waramaysa in Koonfur Afrika ay si rasmi ah u bilowday hanaankii ay kaga bixi lahayd ka mid ahaanshaha Maxkamadda Dembiyada Caalamiga ah (ICC).
21 Oktoobar 2016
Obama: Hadalka Trump ee ku shubashada doorashada waa mid khatar ah Madaxweyne Obama ayaa ku tilmaamay sheegashada Donald Trump ee ah in doorashooyinka Maraykanaka lagu shuban doono ay tahay mid khatar ah oo dhaawacaysa Diimuqraadiyadda.
Obama: Hadalka Trump ee ku shubashada doorashada waa mid khatar ah Pakistan oo mamnuucday isticmaalka warbaahinta Hindiya
Dowladda Pakistan ayaa shaacisay in wixii ka billowdo maanta ay mamnuucday dhageysiga iyo daawashada wararka xarumaha warbaahinta laga leehay dalka Hindiya.
Pakistan oo mamnuucday isticmaalka warbaahinta Hindiya
Malawi waa waddanka ugu khatarta badan ee baaskiil lagu kaxaysto
Duulaanka Mosul oo sii xoogeysanaya
Cuba oo looga arrinsanayo Zika
Itoobiya oo xabsiga dhigtay boqolaal qof
Isku aadka xulalka ee AFCON 2017
Waxaa xalay caasimadda Libreville ka dhacay isku aadka xulalka ka qeyb qaadanaya koobka Qaramada Afrika ee 2017 ka dhici doona dalkaasi Gabon.
Natiijadii kulamadii xalay ee Champions League iyo kulamada caawa
19 Oktoobar 2016
Liverpool iyo Man United oo ismari waayay
18 Oktoobar 2016
Guardiola oo Barcelona ku amaanay ciyaar wanaag
Maqal Barakacayaal ku nool Baladweyne oo cabanaya
Barakacayaal ku nool Baladweyne oo cabanaya
Maqal Kooxda Waayaha Cusub oo Maraykanka lagu casuumay
Kooxda Waayaha Cusub oo Maraykanka lagu casuumay
Maqal Xaashi Cumar oo xirnaa 18 sano ayaa laga soo daayay xabsi Talyaaniga
Xaashi Cumar oo xirnaa 18 sano ayaa laga soo daayay xabsi Talyaaniga
Xaalka Liibiya 5 sano ka dib geeridii Gaddafi
Maqal Waraysi: Nin timaha ku jari jiray hal shillin Kenya ah
Waraysi: Nin timaha ku jari jiray hal shillin Kenya ah
Maqal Saamaynta ay abaarta ku yeelatay seyladda xoolaha ee Gaarisa
Saamaynta ay abaarta ku yeelatay seyladda xoolaha ee Gaarisa
Wararka doorashada Maraykanka 2016
Doorashada Maraykanka oo dhici doonto 8-da bisha Nofeember 2016-ka waxaa ku tartamaya Hilary Clinton iyo Donald Trump
Maxaa loo dhaleecaynayaa ganacsiga xorta ah ?
Waxaa waqti badan la aaminsanaa in ganacsiga xorta ah uu keeno shaqooyin badan, mishaar badan iyo alaab raqiis ah - ka soo horjeeda ganacsiga xorta ah.
Manchester City oo isu diyaarineysa ciyaarta caawa
Kooxda Manchester City ayaa waxa ay u tababaraneysaa sida Barcelona si ay ciyaar wanaagsan usoo bandhigto kullanka caawa.
Xiliga tabinta ‎04:00 GMT - 04:29 GMT
Xiliga tabinta ‎10:59 GMT - 11:30 GMT
Xiliga tabinta ‎13:59 GMT - 14:59 GMT
Xiliga tabinta ‎17:59 GMT - 18:29 GMT
Xul Geedi-socodka cakiran ee doorashada Soomaaliya
Daawo: 13 jir xaas iyo arday ah
Obama: Hadalka Trump ee ku shubashada doorasahada waa mid khatar ah